Rehefa mandeha miasa ny Psychopaths | Martech Zone
Alahady, Aogositra 6, 2006 Zoma, Aprily 23, 2021 Douglas Karr
Betsaka amin'ireo namako akaiky indrindra sy mpiara-miasa amiko no mahalala fa nanana traikefa nahatsiravina aho nandao ny mpampiasa ahy taloha kelin'izay. Ny olona sasany mety manontany tena hoe maninona ny olona tsy afaka mandroso fotsiny aorian'ny zavatra toa izany. Rehefa orinasa lehibe dia lehibe io mpampiasa io dia mazàna miverina hatrany izy ary mampatsiahy anao. Raha tsy mandao ny tanàna ianao dia manohy mandre ny 'teny eny an-dalambe' amin'izay nitranga taorian'ny nandehananao. Tsy safidy ny fialana amin'ny indostria - izany no ataoko fivelomana.
Rehefa karazan'olona tsy mampisaraka asa sy trano ianao ary manary izay rehetra anananao ao amin'ny asanao - sarotra ny mamela azy ny toe-javatra toy izany. Ho antsika izay efa lasa dia mifanaraka daholo ny zava-nitranga. Fa ny sasany amin'ireo olona sisa tavela dia misy dian-kapoka lalina ka tsy zakan'izy ireo akory ny mandeha misakafo antoandro ary miresaka amintsika sisa. Alao an-tsaina ange ny mampijaly olona toy izao.
Lehilahy falifaly aho. Tiako ny asako ary tiako ny ataoko. Fa rehefa ampahatsiahiviko io fotoana io tamin'ny asako dia tsy afaka ny tsy hanontany tena aho hoe maninona no mbola any ivelany ilay tompon'andraikitra ary mbola manao fahavoazana. Olona am-polony maro no lasa, ny departemanta izay nahazo mari-pankasitrahana talohan'izay dia mikorontana izao, ary ny fahombiazan'ny orinasa dia mihalefy noho izany. Saingy… mijanona ny tompon'andraikitra. Tena zava-miafina amiko izany.
Noraisiko boky tao amin'ny Border omaly: Bibilava miakanjo, rehefa miasa ny Psychopaths. Namaky ny sasin-teny teo am-piandrasana namana vitsivitsy aho ary nanapa-kevitra ny hividy ilay boky. Tena te hahafanta-javatra noho ny fanandramana hanazava izay nanjo ahy izany. Tena tsy nanandrana nampifangaro roa sy roa aho. Novakiako avy eo anefa:
“Tsy ny rehetra no tia an'i Helen, mazava ho azy, ary ny sasany amin'ireo mpiasa ao aminy dia tsy natoky azy. Nataony tsinontsinona sy fanamavoana ireo mpiara-miasa aminy zandriny, ary matetika no naneso ny fahaizany sy ny fahaizany. Ho an'ireo izay hitany fa mahasoa amin'ny asany, na izany aza, dia tsara fanahy, mahasarika ary mahafinaritra izy. Nanana talenta tamin'ny fanolorana ny lafiny tsara ho an'ireo izay tsapany ho manan-danja izy, nandritra izany fotoana izany dia nandà, nanisy fihenam-bidy, nanary ary namindra toerana izay tsy nanaiky ny fanapahan-keviny.
Namorona laza i Helen tamin'ny filazany tamin'ireo mpiasa orinasa izay tian'izy ireo ho re, fivoriana fitantanana sehatra miaraka amin'ny ekipa mpanatanteraka toa ny vokatra any Hollywood. Nanitrikitrika izy fa ny tatitra mivantana nataony dia manaraka ny soratra nifanarahana, ka mampihemotra izay fanontaniana tsy ampoizina na sarotra aminy. Araka ny filazan'ny mitovy taona aminy, dia nahay nitantana ny fihetseham-po i Helen, ary nahavita nanodinkodina ny lehibeny izy, nampitahotra ny tatitra mivantana ary nilalao ireo toetra manandanja lehibe nanan-danja taminy.
Ireo andalana roa ireo dia nandefa ara-bakiteny ny hazondamosiko. Tsy azoko antoka fa hanampy ahy hamela heloka sy hanadino izay nanjo ahy sy olona tsara hafa ity boky ity, fa angamba hanampy ahy hahafantatra azy bebe kokoa izany. Mbola tsy henoko ny mpitarika ao amin'ny fikambanana sy ny orinasa izay mpiara-miasa amiko taloha - ny mifanohitra amin'izay indrindra, tsy mahazo mifanerasera amin'izy ireo mihitsy aho.
Angamba azon'izy ireo alaina ity boky ity, vakiany, ary atambatra roa sy roa. Tsy isalasalana fa ho tonga amin'ilay fahatsapana hitako ankehitriny ihany koa izy ireo.
Mety hiara-miasa amin'ny psycopath izy ireo.
Manafatra bibilava amin'ny akanjo ao Amazon
Tags: psychopathmarary sainabibilava miakanjo akanjo
21 Nov 2008 amin'ny 2:45 maraina
Lahatsoratra mahaliana, soa ihany fa mbola tsy nisy zavatra ratsy nanjo ahy izany!
Efa namaky momba ny foto-kevitry ny "firindrana artifisialy" ve ianao ..
Amin'ny orinasa sasany, tsy miatrika ny olana isika, satria mifanaraka, satria mila manana crust. Ka amin'ny sehatra ara-tsosialy dia tsy miresaka amin'ny olona manokana akory ianao fa any am-piasana no terenao. Ny fieritreretana ny hatezerana fotsiny nefa ny faneriterena izany mandritra ny fotoana maharitra dia mety miteraka fironana psycopathic.
23 Nov 2008 amin'ny 11:28 maraina
Amin'ny maha-olona iray hafa niharam-boina tamin'ny fiainganana nahatsiravina, tena miombom-pihetseham-po amin'ny toe-javatra i Doug aho, ary afaka mankafy ny faharetan'ny fanasitranana. Izaho koa dia mbola eo ihany ny mifosa ny zava-nitranga taorian'ny nandaozako, ary na dia efa nanjavona aza ireo fahatsiarovana dia tsy ho afaka mihitsy ny fahasimbana natao tamiko (ho an'ireo izay mbola tsy niaina izany dia sambatra ianao - iharan'ny fianjadian'ny miasa a-lavaka, na mpiara-miasa tsy matoky na ireo manana toerana ambony kokoa, mahatsapa ho voaolana, norobaina, nokapohina, ary navela ho faty ianao). Ny vahaolana iray dia ny fitenenana hoe "ny fahaverezany" ary "Malahelo azy ireo aho." Heveriko ihany koa fa “ireo saro-kenatra izay nahatonga ny fiainako ho tsy zaka nandritra izay taona maro izay dia tsy maintsy manana olana matoky tena mba hiasa mafy mba hahatonga ny fiainan'ny mpandray anjara miabo ho toy izany afobe izany.” Ireo eritreritra rehetra ireo dia nanampy ahy hanasitrana… angamba hanampy anao koa ry Doug.